YEYINTNGE(CANADA): Sunday, July 15
သတင်းစာတိုက်က ဆရာသမားတွေကလဲ မမြင်ဘူးဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဒီလောက် အဆင့်တွေ ဖြတ်လာတာတောင် ဘာမှမထူးဘူးဆိုတော့ အပြင်မှာ တကယ် ရှိတာပဲ ဖြစ်ရမယ်။ အဘိုးရောအဖေရောကကူးတာဆိုတော့ကာသားစဉ်မြေးဆက်လူကုန်ကူးလာတာဖြစ်ရမယ်.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/15/20120အကြံပြုခြင်း
ကြိုတင်ကြံစည် ခြုံခိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ လွှတ်တော်ထဲကအဖြစ်အပျက်
တနင်္ဂနွေနေ့၊ ဂျူလိုင်လ ၁၅၊ ၂၀၁၂
မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ စီးပွားရေး ချွတ်ခြုံကျမှုဟာ ဆန်ရှင်ကြောင့်လို့ ဘယ်လိုများလေ့လာ သုံးသပ်လိုက်ပါလိမ့် ကျားဖြူ အမတ်ကြီး ဒေါ်နန်းဝါနု?
သောကြာနေ့ လွှတ်တော်မှာ ကျားဖြူပါတီက ဒေါ်နန်းဝါနု က လွတ်တော် အစီအစဉ်ထဲ ဆွေးနွေးဘို့ ပါဝင်ထားခြင်း မရှိပဲ ရုတ်တရက် အရေးကြီး တင်ပြစရာရှိလို့ပါ ဆိုပြီးပါလာတဲ့ စာရွက်ကို ထုတ်ပြီး စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ရုတ်သိမ်းရေးအကြောင်းကို ဆွေးနွေးသွားတာပါ။ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကြီးကလည်း ဒါ အရေးကြီးတယ် ဆိုပြီး ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။
ယုဇန ဦးဌေးမြင့်ကလည်း အသင့်ပါလာတဲ့ စာရွက်တွေ ထုတ်ပြီး ထောက်ခံဆွေးနွေးပါတယ်။ ရခိုင်ဘက်က လွှတ်တော်အမတ်ကလည်း ပါလာတဲ့ စာရွက်ထုတ်ပြီး ထောက်ခံ ဆွေးနွေးပါတယ်။ NLD အမတ် ဦးဝင်းထိန်က ထဆွေးနွေးမယ်လုပ်ပြီး မိုက်ကရိုဖုန်း ခလုပ်နိုပ်တာ မီးလင်း မလာခဲ့ပါဘူး။ နောက်က ခုံတွေမှာ သွားလင်းနေတယ် ပြောပါတယ်။ တော်တော်ကြာမှ ဖွင့်ပေးလိုက်၊ ဖွင့်ပေးလိုက် ဆိုပြီး စပီကာက အသံတွေကြားနေရကြောင်း ဦးဝင်းထိန်နဲ့ VOA ဆွေးနွေးခန်းမှာ ဦးဝင်းထိန်က ပြောပါတယ်။
မိုက်ကရိုဖုန်းတွေက အော်တိုမဟုတ်ပဲ စက်ခန်းက လိုသလို ထိန်းချုပ်နေပုံရပါတယ် လို့လည်း ဦးဝင်းထိန်ကပြောပါတယ်။ ဦးဝင်းထိန် ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့် မရခဲ့ပါဘူး။ NLD ကနှစ်ယောက် ထ ဆွေးနွေးပြီးနောက် အချိန်မရှိတော့ပါဘူး။ အတင်းကြီး အသံနဲ့ မဲခွဲအတည်ပြု လိုက်ပါတယ်။
ရုတ်တရက်ကြီး အခုလိုဆွေးနွေးလိုက်လို့ NLD က လက်တန်းတွေ ထပြောရတော့တာပါ။ စစ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ ခြုံခိုတိုက်လိုက်တာပေါ့လေ။
ဒီအဆိုဟာ နဂိုမူလက အစည်းအဝေးအစီအစဉ်မှာ မပါဘဲ ကြားဖြတ် တင်သွင်းတဲ့အဆိုဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းကနေ ဥက္ကဋ္ဌ လုပ်ပိုင်ခွင့် သုံးပြီး အဲဒီအဆိုကို အတည်ပြုလိုက်တာလို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ တက်ရောက်နေတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က မိတ္ထီလာမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းထိန်က ပြောပါတယ်။
“နားထောင်နေရင်းနဲ့ ပုံစံက မကျဘူး။ ပြောမယ်ဆိုတော့လည်း ပြောလို့မရဘူး။ ကျနော်ပြောချင်တာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းက လူ့အခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်လို့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာ။ အဲဒီအကြောင်းကို မသိဘဲနဲ့။ အဲဒီအကြောင်းတွေကို ကောင်းကောင်း သိချင်ရင် ကောင်းကောင်း လေ့လာဖို့ လိုတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး ဘယ်လောက်ချိုးဖောက်တာတွေကြောင့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာ။
“အခု ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်တဲ့ အစိုးရက မီဒီယာတွေကိုလည်း အထိုက်အလျောက် လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်။ ကျနော်တို့ကိုလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လို့ရအောင်အထိ ညှိပေးတယ်။ စီးပွားရေးပိုင်းမှာလည်း မော်တော်ကားကိစ္စတွေ အထိုက်အလျောက် လုပ်ပေးတယ်။ နိုင်ငံတကာကလည်း သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့တာတွေကို လျော့ပေးတယ်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရဘက်က အထိုက်အလျောက် လျော့ပေးလို့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာတွေလည်း လျော့ပေါ့လာတာ။ ပိုပြီးတော့ လျော့ပေါ့ပေးချင်ရင် ပိုပြီး လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးကို လုပ်ရမယ်။ ဒါကြောင့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ရုပ်သိမ်းရေးကို တောင်းဆိုမယ့်အစား ဒီနိုင်ငံမှာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကနေ လူ့အခွင့်အရေးကို ပိုပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လုပ်ပေးပါဆိုတဲ့ အဆိုကို တင်ချင်တာ မတင်လိုက်ရဘူး။ အဲဒါပါပဲ။”အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က မိတ္ထီလာမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းထိန် ..(DVB)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/15/20123အကြံပြုခြင်း
ဒီပုံလိမ်ကို၂ရက်အတွင်း၅၆၀၀၀ ဖေ့ဘွတ်သုံးစွဲသူ မျှဝေခဲ့ကြတယ်။
ဒီပုံကိုပဲ..Maher Zain ဆိုသူရဲ့page မှာ
35,006 others like this.
ဘင်္ဂလီလူမျိုး(၈)ဦးအား မြန်မာ့ရေတပ်မတော်မှ ဖမ်းဆီးရမိ
(၁၅-၇-၂၀၁၂)နေ့ မွန်းလွဲ ၂း၃၀ ကျော်ခန့်တွင် ဂစ္ဆပနဒီမြစ်အတွင်းတွင် ဘင်္ဂလီလူမျိုး(၈)ဦးအား မြန်မာ့ရေတပ်မတော်မှ ကင်းလှည့်လည်စဉ် ဖမ်းဆီးရမိကြောင်းသိရပါသည်။
အဆိုပါ ဘင်္ဂလီလူမျိုး (၈)ဦးမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့်ရ်ှမှခိုးဝင်လာသူဖြစ်ကြောင်းလောလောဆယ်သိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသူများမှာ (၁) နူရ်အာလောင်(ဘ)ယာကုတ် (၂) မာဆင်(ဘ)နူရ်အာလောင် (၃) အဏ္ဏ၀ါဂ(ဘ) နူရ်ဂုလ်၊ ဆာဒဲလ်(ဘ) နူရ်ဂုလ်ဆလပ်(၅) မိုဟာမတ်အီနုစ်(ဘ)အီလီယတ်ခ် (၆) နူရ်မာမောက်(ဘ)အဒူရာမိတ် (၇) ဆွေယော့ဒူလာမီရ်(ဘ)နူရ်ရာလောင် (၈) မာမတ်အာလောင်(ဘ)ဆွေယော့ဆာလမ် တို့ဖြစ်သည်။ (၈) ဦးအနက် (၁)ဦးမှာ ဦးခေါင်းတွင် ဒါဏ်ရရရှိသွားသဖြင့် စစ်တွေပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ကုသထားလျှက်ရှိပြီး၊ ကျန်(၇)ဦးအား စစ်တွေအကျဉ်းထောင်သို့ ပို့ဆောင်၍ စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းသိရှိရသည်။
(ယခုပုံများတွင် ယခင်ထည့်လေ့ထည့်ထမရှိသော ရေစာများအား ထည့်ထားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ပြင်ပရှိ ကုလားများသည် ပုံများအားကူးယူပြီး သတင်းအမှားကို လုပ်ကြံဖော်ပြမည်စိုးသောကြောင့် ထိန်းထားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်)
လုပ်ကြံ ပေးပို့သော သတင်းမှား ဓာတ်ပုံများဖြင့် ဘာသာရေးအသွင် ဖန်တီးဆန္ဒပြနေခြင်းများ
By Wai Yan De Mo
လုပ်ကြံ ပေးပို့သော သတင်းမှား ဓာတ်ပုံများဖြင့် ဘာသာရေးအသွင် ဖန်တီးဆန္ဒပြနေခြင်းအား ကန့်ကွက်ပါတယ်...။ကန့်ကွက်ကြပါ။
http://www.daylife.com/photo/05V4cBlaPXdl0?__site=daylife&q=Rohingya We are strongly oppose liar report images.
ှဆန္ဒပြသူတွေ ကိုင်ဆောင်လာတဲ့ ပုံရဲ့ ညာဘက်ထောင့်မှာ စစ်တွေမြို့မှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား နေအိမ်တွေ မီးရှို့ခံရစဉ် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံနဲ့ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ၂၆ရက်နေ့ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးအတွင်းက ဗဟန်းကြားတောရလမ်းမှာ လုံထိန်းတွေနဲ့ ထပ်တိုက်ရင်ဆိုင်စဉ်က ပုံကို မဆီမဆိုင် ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာများ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရသယောင် ဖော်ပြထားပြီး၊ အနီရောင်နဲ့ ဝိုင်းထားတဲ့ပုံကတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ပျံနှံနေတဲ့ (၂၀၀၉ခုနှစ်က ရသေ့တောင်မြို့က ဟုထင်ပါသည်) ရခိုင်အမျိုးသမီးငယ်တဦးအား ဘင်္ဂလီများမှ သတ်ဖြတ်ထားတဲ့ ပုံအား ထင်ယောင်ထင်မှား ဖော်ပြထားသလို ခရမ်းရောင် ဝိုင်းထားတဲ့ ပုံကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁၁ရက်နေ့က စစ်တွေမြို့ ဗျိုင်းဖြူရွာမှာ ဘင်္ဂလီ အကြမ်းဖက်များရဲ့ လက်ချက်နဲ့ သေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအား စစ်တွေ နာရေးအဖွဲ့ယာဉ်ပေါ်မှာ တင်ထားစဉ် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံများအား ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာများ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် သေဆုံးရသယောင် ဖော်ပြထားပါတယ်..။
အထက်ပါ AP သတင်းဓာတ်ပုံများဟာ မမှန်မကန် ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံတွေ ပါရှိနေတဲ့ အတွက် ပြည်ပ အခြေဆိုက် BBC,VOA,RFA,DVBနဲ့ Irrawaddy သတင်းဋ္ဌာနများမှ မိမိတိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအရေးကို ကြည့်ပြီး အမှန်အတိုင်း ပြန်လည် ဖြေရှင်း ဖော်ပြဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်..။
ဖေ့စ်ဘွတ် ပရိသတ်များ အနေနဲ့လည်း အပြုသဘော ဝေဖန်ရေးသားပြီး English ဘာသာကျွမ်းကျင် သူများမှ ဓာတ်ပုံပါ အဖြစ်မှန်များအား ရေးသားဖော်ပြပြီး သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများရှိ အင်ဒိုနီးရှားသံရုံးများသို့ ပေးပို့စေလိုပါတယ်..။
ထို့အပြင် မြန်မာအစိုးရမှလည်း ဓာတ်ပုံပါ အဖြစ်မှန်အား အာဏာပိုင်ချင်း ပေးပို့ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်...။
လှုံဆော် ဖော်ပြနေခြင်းမဟုတ်ပါ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ညှိုးနွမ်းစေတဲ့ အဆိုပါ လိမ်လည် လုပ်ဆောင်ချက်အား ပြန်လည် ဖြေရှင်းနိုင်စေရန် ဖော်ပြရခြင်းဖြစ်သည်..။
ဆဲဆိုနေသည့် ကွန်မာန့်များ ရေးသားနေမည့် အစား အဖြစ်မှန် သတင်းမှန် အတွက် ပူပေါင်းပါဝင် ကူညီလုပ်ဆောင် ကြပါ..။
အိန္ဒိယ သံရုံးတွင် မီးလောင်
ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့ညနေ ၆ နာရီ ၅ မိနစ်ခန့် တွင် ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်လမ်းနှင့်ပန်းဆိုးလမ်းထောင့် ရှိ အိန္ဒိယ သံရုံး အပေါ်ဆုံးထပ်တွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော် ကုန်သည်လမ်းရှိ အိန္ဒိယသံရုံးဒုတိယ အထပ် အင်တာနက် Server ထားရှိသော အခန်းတွင် ယနေ့ ညနေ ၆ နာရီအချိန်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နာရီဝက်ခန့်အကြာ မီးငြိမ်းသွားခဲ့ကြောင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းရခြင်းအကြောင်းကို စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ယင်းမီးလာင်မှုဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော နေရာသို့သွားရောက်သတင်းရယူလျက်ရှိသည့် The Voice Weekly သို့ သတင်းပေးပို့သည်။
ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ပန်းဆိုးတန်းလမ်းထောင့်အနီးရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံရုံး အပေါ်ဆုံးထပ်၌ မီးလောင်ကျွမ်းမှုမှာ ညနေ ၆ နာရီအချိန်က စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ညနေ ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန်တွင် မီးငြိမ်းသွားခဲ့ကြောင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်မီးသတ်စခန်းများမှ မီးသတ်ကား ၁၆ စင်းဖြင့် ငြိမ်းသတ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ မီးလောင်ကျွမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပဲ မီးလောင်ကျွမ်းမှုသည် ဝိုင်ယာရှောခ့်ကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အခင်းဖြစ်ပွားရာ၌ ရှိနေသော မီးသတ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောပါသည်။
UNHCR ၏ မဟာမင်းကြီး Mr. Antonio Guterres ပြောကြားချက်.....
(နိုင်ငံတနိုင်ငံကနေ တနိုင်ငံကို အခြေအနေ တခုခုကြောင့် ထွက်ပြေးလာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကိုသာတတိယနိုင်ငံတွင် အခြေချနေထိုင်ရန် စီစဉ်ပေးနိုင်မည်၊၊)
မဟာမင်းကြီး Mr. Antonio Guterres ခင်ဗျား....
အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊ထိုင်းအစရှိတဲ့နိုင်ငံပင်လယ်ကမ်းခြေတွေမှာUNHCR ၏ ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ရုံးခွဲတွေထားပေးပါ၊ထွက်ပြေးလာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကိုသာတတိယနိုင်ငံတွင် အခြေချနေထိုင်ရန် စီစဉ်ပေးပါ။ပင်လယ်ထဲပြန်မောင်းပို့တာတားဆီးပေးပါ။
ရိုဟင်ဂျာများသည် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR မှ သတ်မှတ်ထားသည့် ဒုက္ခသည် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသွားပါပြီ၊
ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်လောင်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံလေးမှာဌာနေတိုင်းရင်း သားတွေနဲ့သင့်မြတ်အောင်နေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့သူတွေကိုလက်ခံ ထားရှိရန်အလွန်ခက်ခဲလှပါသည်။
ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေထူထောင်လိုမှုကိစ္စများ၊ဆူပူမှုများသည်လုံခြုံရေးအရထိန်း သိမ်းခြင်းသားဖြစ်သည်၊လက်ရှိတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တချို့၏လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမြန်မာအစိုးရကရိုဟင်ဂျာဆိုသူများအားပြုလုပ်နေသည်ဟုဆန္ဒပြခြင်းများ၊သတင်းဖေါ်ပြဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်နေတာ တွေ့ရှိနေရပါသည်။ ထိုသူများအားလက်ရှိရိုဟင်ဂျာဆိုသူများရှိနေသည့်နေရာသို့လာရောက် လေ့လာခွင့်ပေးပါမည်။တွေ့ဆုံခွင့်ပေးပါမည်။
ကောလဟာလများအားအခြေခံပြီးမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဖိအားပေးခြိမ်းခြောက် မှုများ၊တိုက်ခိုက်မှုများ၊ကြံစည်မှုများအားအမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်၊တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းရိုင်းပင်းသည့်စိတ်ဓါတ်ဖြင့်တမျိုးသားလုံးမှ ဆန့်ကျင်သွားမည်ဖြစ်သည်၊။
အမှုအခင်းများထပ်မံပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိစေရန်မဟာမင်းကြီး အနေဖြင့် ထွက်ပြေးလာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကိုသာတတိယနိုင်ငံတွင် အခြေချနေထိုင်ရန် စီစဉ်ပေးရန်လေးစားစွာတောင်းဆိုပါတယ်။
ရိုဟင်ဟူသည်မှာ (China ကို တရုတ်ဟု မြန်မာတို့က ခေါ်သကဲ့သို့) (ရခိုင်ပြည်ကို ရိုဟင်) ဟုဘင်္ဂလား - ဘင်္ဂလီများက ဘင်္ဂလီဘာသာဖြင့် ရှေးခေတ်က ခေါ်ဆိုကြခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး ဆင့်ပွား ဝေါဟာရဖြစ်သော ရိုဟင်ဂျာမှာ ရခိုင်ပြည်သားဟု အဓိပ္ပါယ်ရကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဝေါဟာရမှာ ရခိုင်ပြည်သား သို့မဟုတ် ရခိုင်များနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပြီး၊ နောက်ပိုင်းကာလမှသာ ရခိုင်ပြည်သို့ ဘင်္ဂလားမှ ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူ ဘင်္ဂလီများနှင့် သက်ဆိုင်မှု မရှိပါ။ ၁၉၅၀ နောက်ပိုင်းတွင်မှ အဆိုပါ လူမသိ သူမသိသော ရှေးဟောင်း ဘင်္ဂလီ ဝေါဟာရကို ရခိုင်ပြည်နယ်ရောက် ဘင်္ဂလီ များက နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ကာ လှည့်စား အသုံးပြုလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟူသည့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးသစ် နိုင်ငံရေး ကစားကွက် တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အခြားပြည်မကြီးများတွင်နေထိုင်လျက်ရှိကြသောအစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ် သူများတွင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးသစ် နိုင်ငံရေး ကစားကွက် လုံးဝအလျင်းမရှိပဲအေးအတူပူအမျှယှဉ်တွဲနေထိုင်တာတွေ့ရမှာပါ၊ဘာသာရေးအရလည်းလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရရှိပါတယ်။
ယှဉ်တွဲနေထိုင်လိုစိတ်မရှိသူများအားအခြေချနေထိုင်ခွင့်ပေးရန်ပင်အလွန်ခက်ခဲလှပါ၍ထိုဒုက္ခသည်တွေကိုသာတတိယနိုင်ငံတွင် အခြေချနေထိုင်ရန် စီစဉ်ပေးရန်လေးစားစွာထပ်မံတောင်းဆိုပါတယ်။
English Translation ကောင်းတဲ့သူလှလှလေးပြင်ပြီး ဘာသာပြန်ပေးပါ။UNHCR..ပြင်ပမီဒီယာတွေသတင်းဌာနကြီးတွေ ဆီဝိုင်းပို့ကြရအောင်.. .........................
ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းကို သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး
အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် ကို ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး
ဦးကျော်ဆန်း ကိုတော့ ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီး တဲ့
"ရုပ်သံလွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာအဆင့် သင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ"
Myanmar Media Development Center(MMDC) ၏ ဒီပလိုမာအဆင့်မီဒီယာသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဇူလိုင်(၁၅)ရက်နေ့ နံနက် ဆယ်နာရီခွဲခန့်က Junction Square တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
အခမ်းအနားတွင် Forever Group Co., Ltd ၏ CEO ဦးဝင်းမော်မှ MMDC သင်တန်းဖြစ်ပေါ်လာပုံအကျဉ်းချုပ်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားပြီးနောက် ဒါရိုက်တာ ဦးခင်မောင်ဌေးမှ ယင်းသင်တန်းတွင် သင်ကြားမည့် ဘာသာရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံစာပေထုတ်ဝေသူနှင့် ဖြန့်ချိသူများအသင်းပထမအကြိမ် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး ကို ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် နံနက်ပိုင်း က ရန်ကုန်မြို့ ၊ သူနာပြုတက္ကသိုလ်၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အခမ်းအနားတွင် ပြန်ကြားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းကလည်းကောင်း၊ သဘာပတိ ဦးမောင်မောင်အေး(မောင်ဟေမာ)ကလည်းကောင်း အမှာစကားအသီးသီးပြောကြားခဲ့သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/15/2012 1 အကြံပြုခြင်း
ကြိုတင်ကြံစည် ခြုံခိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ လွှတ်တော်ထဲ...
ဒီပုံလိမ်ကို၂ရက်အတွင်း၅၆၀၀၀ ဖေ့ဘွတ်သုံးစွဲသူ မျှဝေ...